Meizu 16T သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်း Androidsis
နောက်ဆုံးတော့ Meizu 16Tယိုစိမ့်မှုအမျိုးမျိုးတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောမျှော်လင့်ချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အများဆုံးပြောခဲ့သည့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တရုတ်ထုတ်ကုန်များသည်စီးရီးကိုချဲ့ထွင်ရန်အတွက်၎င်းကိုတူညီသောအကွာအဝေးတွင်ရှိပြီးဖြစ်သောအခြားကုမ္ပဏီဖုန်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားစေရန်အတွက် "T" ကို၎င်း၏ပုံမှန် nomenclature တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမိုဘိုင်းအသစ်နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံး။
1 Meizu 16T သည်ဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ။
Meizu 16T သည်ဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ။
အတူစတင်, ၎င်း၏မျက်နှာပြင်မှာ Super AMOLED နည်းပညာဖြစ်ပြီးအရွယ်အစားမှာ ၆.၅ လက်မရှိသည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသော terminal တစ်ခုဖြစ်စေသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်ထိုသို့မဟုတ်ပါ၊ panel ကိုကိုင်ထားသည့် bezels များသည်အလွန်သေးငယ်သော်လည်းအထက်ပိုင်းတွင်မည်သည့်အမျိုးအစားမျှမပါရှိပေ။ မျက်နှာပြင်၏ resolution သည် ၂,၂၃၂ x ၁၀၈၀ ပစ်ဇယ် (၁၈.၆: ၉) တွင် FullHD + ဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလက်ဗွေဖတ်စက်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည် Super mTouch ဟုခေါ်သည့်အပြင်မိုဘိုင်းကိုသော့ဖွင့်ရန် 2,232 စက္ကန့်သာကြာသည်။ အမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍ အမြင့်ဆုံးတောက်ပနိုင်သည့်အရာသည် ၆၀၀ nits ဖြစ်ပြီးအရောင်အသွေးစုံလင်မှုသည် DCI-P1,080 ဖြစ်သည်။
El Snapdragon 855 2,84 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် Meizu 16T ကို 8 GB အထိ LPDDR4x RAM ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အထင်ကရဖုန်းများနည်းတူ Meizu 16T တွင် ၂၅၆ GB အထိ UFS 256 သိုလှောင်မှုပါရှိသည်။ ၄၅၀၀ mAh ဘတ္ထရီပါ ၀ င်ပြီး 3.0 W မြန်နှုန်းအားသွင်းသည်။
Meizu 16T သည်ဂိမ်းကိုအာရုံစိုက်သောဖုန်းဖြစ်သည် ၎င်းတွင် linear တုန်ခါမှုမော်တာနှင့် ၄.၀ ဂိမ်းကစားခြင်းစနစ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် dual stereo speakers နှင့် 4.0mm audio jack ပါဝင်သည်။ ပြည့်စုံမှုအတွက် Meizu 3.5T တွင်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန် Tencent နှင့်လက်တွဲခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်စမတ်ဖုန်းတွင် Android 16 Pie OS နှင့် OneMind9AI အင်ဂျင်ပါ ၀ င်သည့် Flyme7UI စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
Meizu 16T ၏နောက်ဘက်တွင်aဒေါင်လိုက်သုံးဆကင်မရာစနစ်f/ 362 aperture နှင့် PDAF ပါ ၀ င်သော 12-megapixel Sony IMX1.9 ပင်မအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူ 8-megapixel ultra-wide lens,f/ 2.2 aperture ပါ ၀ င်သည့်မြင်ကွင်းနှင့် 118 ဒီဂရီမြင်ကွင်းကိုမြင်ကွင်းနှင့် 5-megapixel depth sensor ကိုf/ 1.9 aperture နှင့်အတူ။ LEDs ပါ ၀ င်သည့်နောက်ကင်မရာများတွင် AI မြင်ကွင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ စူပါညဥ့်နက်စနစ်နှင့်ပုံတူမုဒ်များပါဝင်သည်။ ရှေ့ကင်မရာသည် 16 megapixel ကင်မရာဖြစ်ပြီးf/ 1.9 aperture ပါဝင်သည်။
ဓာတ်ပုံဆောင်ပုဒ်အပြီးတွင် 2.5cm super macro ရိုက်ချက်များကိုလည်းရိုက်ကူးနိုင်သည်။ အလင်းနည်းသောအခြေအနေများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော selfie ဓါတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီအပြင်, 4K ဗီဒီယိုကို 60/240 fps (တစ်စက္ကန့်လျှင် frame) ရိုက်ကူးနိုင်သည်။
မျက်နှာပြင် ၆.၄ လက်မစူပါ AMOLED နှင့် FullHD + resolution 6.5 x 2.232 pixels (1.080: 18.6)
လုပ်ငန်းစဉ် Qualcomm Snapdragon 855
ရမ်6/ 8 GB အထိ
အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ် 128 / 256 GB အထိ
နောက်ဘက်ကင်မရာ Triple 12 MP (Sony IMX362) + ၈ MP အကျယ်ထောင့် (၁၁၈ ဒီဂရီ) + ၅ MP၊ စက္ကန့် ၆၀/၂၄၀ ဘောင်ဖြင့်ရိုက်ကူးထားသော 8K ဗီဒီယို။
ရှေ့ကင်မရာf/ 16 ကို aperture နှင့်အတူ 1.9 အမတ်
ဘက်ထရီ 4.500-watt အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနိုင်ရန်အတွက် 18 mAh ထည့်သွင်းထားသည်
OS Flyme9အောက်ရှိ Android7Piece
အခြားအင်္ဂါရပ်များ ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်အတွက် In-display fingerprint reader / Dedicated modes နှင့် functions များ
Meizu 16T ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးထိုနိုင်ငံတွင်ဝယ်ယူရန်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာမီကမ္ဘာအနှံ့ရှိအခြားစျေးကွက်များ၌ကုမ္ပဏီကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ရန်မျှော်လင့်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုသာတင်သွင်းနိုင်သည်။ သူတို့ရရှိနိုင်သောအရောင်အမျိုးအစားများမှာ Whale Blue၊ Daylight Orange နှင့် Green Green ဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းနှင့် RAM နှင့် ROM မူကွဲများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
Meizu 16T 6GB RAM + 128GB သိုလှောင်မှု: ယွမ် ၁,၉၉၉ (၂၅၃ ယူရိုသို့မဟုတ် ၂၈၃ ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်း) ။
Meizu 16T 8GB RAM + 128GB သိုလှောင်မှု: ယွမ် ၁,၉၉၉ (၂၅၃ ယူရိုသို့မဟုတ် ၂၈၃ ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်း) ။
Meizu 16T 8GB RAM + 256GB သိုလှောင်မှု: ယွမ် ၁,၉၉၉ (၂၅၃ ယူရိုသို့မဟုတ် ၂၈၃ ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်း) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Meizu 16T သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်လာသည်။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များ၊
Meizu ငါဝယ်မည် ။-
ဖန်ဆင်းရှင်ကိုချီးမွမ်းပါ… NOCHCH !!! 1?
El fire သို့ပြန်သွားပါ
Sony သည် 4G နှင့်အတူအဆင့်မြင့်ဖုန်းများကိုမထုတ်ပေးပါ
OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition ကိုကြေငြာခဲ့သော်လည်း T-Mobile ၏သီးသန့်ဖြစ်သည်